Xubinnimada - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Xubin
Waan wada xoog badanahay.
CIRC waa isbahaysi xubintu hogaamiso, oo macnaheedu yahay in shaqadeena ay qaabeeyeen daraasiin kooxo iyo ururo ku baahsan gobolka oo ka kooban xubinimadeena –waxaa ka imanaya kooxo yaryar sida Durango's Compañeros: Xarunta Kheyraadka Soogalootiga ee Afar geesood kuwa baaxadda weyn leh sida ACLU ee Colorado. Waxaan ku taageernaa ururada xubnaha ka ah falanqaynta siyaasada, u qareemida, iyo horumarinta hogaaminta, xubnahuna waxay go'aamiyaan ahmiyadaheena siyaasadeed iyada oo loo marayo shir sanadeedka gobolka oo dhan. Hoggaamiyeyaasha ururka ee ka socda mid kasta oo ka mid ah gobollada Colorado ayaa sidoo kale loo doortey inay u adeegaan Guddiga CIRC ee Agaasimayaasha.
Ayaa xubin noqon kara?
Koox kasta oo ku saleysan Colorado ama urur jecel cadaaladda socdaalka waxay noqon kartaa xubin CIRC ah! Kooxaha diinta, ururrada ardayda, ururada deriska, ama nooc kasta oo koox ah ayaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan xubinnimada. Xubinnimadu waxay ubaahantahay $ 100 khidmad sanadle ah, oo lagu maarayn karo qorshe lacag bixin haddii loo baahdo.
Codso hoosta, ama la xiriir qabanqaabiyahaaga gobolka wixii su'aalo ah:
Gobolka Waqooyiga CO: Josh Stallings josh@coloradoimmigrant.org
Deegaanka Denver Metro: Chau Phan chau@coloradoimmigrant.org
Gobolka CO ee Koonfurta: Nayda Benitez nayda@coloradoimmigrant.org
Gobolka Buuraha (Garfield, Pitkin, iyo Degmooyinka Shirarka): Laura Segura laurasegura@coloradoimmigrant.org
Reer Galbeedka: Clara O'Connor Clara@coloradoimmigrant.org
Xubinnimada CIRC waxay u furantahay ururada kaliya. Ururada uqalma inay codsadaan xubinnimada waxaa lagu qeexay qawaaniinta CIRC koox ama hay'ad mas'uul ka ah xubinnimada in kabadan laba qof ama Guddi Agaasimayaal ama gole maamul.
Faa'iidooyinka Ururada Xubnaha CIRC
Qayb ka noqo awoodda dhismaha xuquuqda soo galootiga ee gobolka oo dhan iyo abuurista isbeddel gobolka oo dhan ah.
Fursadda isku xirnaanta / iskaashi lala yeesho maxalliga, gobolka, iyo la-hawlgalayaasha qaranka si loo horumariyo caddaaladda; dhisaan xiriiro qoto dheer iyo awood guud ahaan gobolka iyo qarankaba.
Tababbarka iskutallaabta iyo wadaagista khibrada ururada kale ee xubnaha ka ah.
Imaanshaha iyo mudnaanta codbixinta ee Golaha CIRC iyo Shirarka Gobollada.
U codee magacaabida iyo doorashada Golaha Maamulka; u-qalmo inuu yeesho wakiil dib-u-magacaabid Guddiga Agaasimayaasha.
U codee si aad u dooratid ololaha mudnaanta leh ee CIRC, arrimaha iyo barnaamij siyaasadeedka.
Helitaanka u adeegidda awoodda go'aan qaadashada ee ololaha iyo soosaarida guddiyada.
Taageerida u ololeeyaha gobolka ee CIRC inta lagu gudajiro kalfadhiga sharci dejinta gobolka si loo hormariyo yoolalka isbahaysiga.
Taageerada awooda shaqaalaha ee isgaarsiinta, warbaahinta bulshada, horumarinta hogaaminta iyo cilad bixinta guud.
Helitaanka kaalmo farsamo iyo tababaro ku saabsan horumarinta ururada, lacag ururin, isgaarsiinta, horumarinta hogaaminta iyo u doodista siyaasada.
Helitaanka qalabka warbaahinta-badan sida qalabka dhawaaqa dhacdada, qalabka tarjumaadda, borojektar LCD, kamarad dijitaal ah / fiidiyow (waxay kuxirantahay helitaanka iyo baahida).
Dhiirrigelinta iyo iskuxirka ururinta websaydhada CIRC, warbixin sanadle ah oo sharci dejin ah, iyo daabacado kale.
Ka-qayb-galka ogeysiisyada xubinta oo ay la socoto macluumaad hadda jira oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee socdaalka, howlaha u-doodista iyo digniinta.
Doorka iyo Waajibaadka Ururada Xubnaha CIRC
Taageer iyo dhiirrigelinta himilada iyo aragtida CIRC.
Kaqeybgal Golaha CIRC ee sanadlaha ah iyo shirarka xubnaha gobolka.
Kaqeybqaado ololaha soona saar guddiyada go'aan qaadashada sida ugu macquulsan ama ku habboon.
Caawi magacaabida iyo doorashada Golaha Maamulka.
Taageer iyo dhiirrigelinta ololaha CIRC, iyadoo laga faa'iideysanayo xooggooda, ilaha iyo awoodaha ururradooda.
Bixi khidmadaha sanadlaha ah ee $ 100. (Uma qalmo in laga codeeyo ganacsiga isbahaysiga haddii lacagaha sanadlaha ah aan la bixin.)
Ka caawi kafaala-qaadka Golaha CIRC iyo dhacdooyinka kale sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
Shuruudaha iyo Nidaamka Xubinnimada Urur
Si loo noqdo Xubin CIRC, ururadu waa inay:
Lagula heshiiyo Himilada iyo Himilooyinka CIRC.
Ku raacsanaanta mabaadi'da iyo tilmaamaha aasaaska ee CIRC.
Buuxi, saxiix oo soo gudbi foomkan dalabka.
Ka hel wakiilka CIRC wareysiga / booqashada goobta oo aad ka hesho codka oggolaanshaha CIRC
Lacagaha: $ 100 oo loogu talo galay ururada sanad walba (oo aan awood u lahayn inay ka codeeyaan ganacsiga isbaheysiga haddii lacagaha aan la bixin.) Xubnaha cusub waxaa laga codsanayaa inay bixiyaan $ 100 ajuurada waqtiga isqorista haddii ay macquul tahay. Codsigu wuxuu u oggolaanayaa habab kala duwan oo lacag bixin ah sida ugu habboon. Xubnaha cusub ee aan bixin karin $ 100 ajuurada waqtiga diiwaangelinta ayaa dejin kara qorshe lacag bixin ah
** Xusuusin: Xubnaha aan bixin khidmadaha xubinnimada sannadlaha ah xaq uma laha inay codeeyaan